Haweeney qaar ka mid ah uur ku jirteeda laga helay meel bani'aadamka kale uusan ku lahayn - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka COURTESY OF THE BENTLEY FAMILY
Ardaydii oo qalliin ku baranaya meydka haweeneydaasi ayaa markii dambe ogaaday in inta badan xubnaha muhiimka ahi ee haweeneydaasi sida caloosha, beerka iyo uur ku jirta kale aysan ku oolin meelaha cadiyan lagu bartay in bini'aadamka ay uga yaalaan.
Dhakhaatiirta ayaa la yaabay in haweeneydan ay si caadi ah u nooleyd oo waliba ay da' ahaan gaartay ku dhawaad boqol sano iyada oo xubnaha jirkeeda aysan ku oolin meeshii loogu tala galay.
Lahaanshaha sawirka LYNN KITAGAWA
Arrintani waa mid "aan caadi ahayn", ayuu yiri Dr. Cam Walker, oo ah macalin ka tirsan Jaamacadda Caafimaadka iyo Sayniska ee Oregon isla markaana ku takhasusay jirka bani'aadamka, kaasi oo ka caawiyay ardayda fasalkiisa in ay ogaadaan in xubnaha haweeneydan ay ku yaaliin meel aanan marnaba laga filanayn oo in lagu arko ay nadir tahay.
Ardayda ayaa ogaatay in jirka Bentley inta la og yahay uu aad uga duwan yahay jirka kale ee bani'aadamka.
Dr Walker ayaa sheegaya in qiyaastii 50-kii milyan ee carruur ah ee ku dhalata xaaladdan, uu mid kaliya un ka noolaado oo uu qaangaaro. Waxa uu sheegay inay rumeysan yihiin in Bentley ay tahay qofkii ugu horreeyay oo noocaasi ah oo da'daasi gaara.
"Dhakhaatiirta asxaabta aynu nahay midkoodna waligii ma uusan arkin qof jirkiisa ku deeqay oo beerkiisa iyo xubnaha kale ee jirka ay ku yaaliin meel kale. Saaxibadey qaarkood waxay jaamacadahani dhigayeen muddo ka badan 30 sano," ayuu yiri Dr Walker. "Weligey ma arkin wax sidaasi oo kale ah."
"Ardayduna, sida ay ila tahay, waligood ma illaawi doonaan," ayuu sii raaciyay Dr Walker.
Lahaanshaha sawirka OHSU/KRISTYNA WENTZ-GRAFF
Bentley iyo seygeeda ayaa labaduba waxay go'aansadeen in meydkooda ugu deeqaan jaamacada ee Oregon, ka dib markii ay akhriyeen gabay uu qoray Robert Noel Test oo ku saabsana xusuusta ehelkaaga aad jeceshay ee kaa dhintay.